Taliyaha Nabad-Sugidda & Booliska DF oo Warqad lama filaan ah u gudbiyay Madaxweyne farmaajo | Nabadqaad Online
Taliyaha Nabad-Sugidda & Booliska DF oo Warqad lama filaan ah u gudbiyay Madaxweyne farmaajo
Warar aynu ka heleeyno Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ay inoo xaqiijinayaan in Taliyaasha Ciidamada Booliska iyo Nabadsugidda Soomaaliya ay warqad is casilaad ah u gidbiyeen Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Gen. Cabdullaahi Gaafow iyo Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa ka dalbaday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo in uu ka aqbalo Warqadooda is casilaada ah.
Laakiin illo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu weli aqbalin is casilaada Labada Taliye waxaana la sheegay in uu shuruud uu ku xiray ka hor inta uusan aqbalin warqadooda istiqalada ee shaqo ka tagista ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku wargeliyay GAAFOOW iyo XAAMUD in ay bixiyaan Lacagaha Mushaarka Ciidamada Booliska iyo Nabadsugidda oo la musuq maasuqay.
Bilaha aan la siin Ciidamada xuquuqdooda waa 4tii bil ugu dambeysay, lamana oga in madaxweynaha go’aankaas uu ku sii taagnaan doono iyo in uu ka aqbali doono maadaamada amniga dalka uu meel halis ah marayo
Saraakiisha dhinaca amniga ugu sareysay ee Booliska iyo Nabadsugidda in ay dalbadaan is casilaad ayaa imaaneysa xili Muqdisho Mudooyinkii u dambeyay Amnigeeda uu faraha ka baxay waxaana jira cadaadis xoogan oo ay la kulmeen labada masuul.